Hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya oo qaadacay natiijada doorashada (Video) | shumis.net
Home » News » Hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya oo qaadacay natiijada doorashada (Video)
Hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya oo qaadacay natiijada doorashada (Video)
Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya, Raila Odinga ayaa qaadacay natiijada doorashada, iyadoo weli ay socoto tirinta codadkii la dhiibtay. Raila waxaa uu sheegay in aysan ku qanacsaneyn qaabka ay wax u wadaan guddiga doorashada.
Dhanka kale weli waxaa socda tirinta codadka doorashada Kenya, waxaana codadka horudhaca ee ilaa iyo imika la tiriyay ayaa muujinaya in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku horreeyo boqolkiiba konton iyo shan codadkii la tiriyay. Guddiga doorashada waxaa kale oo ay shegeen in la tiriyay sedex meelood labo meel goobihii ay dadka ka dhiibteen codadka. Waxaana uu Madaxweyne Uhuru uu ku hogaaminayaa Raila kow iyo toban dhibcood oo ah codadkii la tiriyay.
Title: Hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya oo qaadacay natiijada doorashada (Video)